Ny Semalt dia mahavariana tranga mahaliana momba ny mpampiasa aterineto sy ny hosoka
Mety hitranga amin'ny fotoana rehetra ny hosoka sy ny mpampiasa Internet. Ny mpiserasera amin'ny aterineto dia mety ho lasibatra.Noho izany dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fiasan'ny aterineto mba hahafahan'ny mpampiasa aterineto, ny mpamorona sy ny tompon-tranonkala afaka miaro ny mafy orinavola - computer rent to own programs.
Alexander Peresunko, ny Semalt Mpitantana Success Manager, mamelabelatra ao amin'ity lahatsoratra ity ny hosoka sy ny pejin-dresaka mahazatra izay mety hifanena amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.
Mba hanombohana, ny fangalarana famantarana dia manondro ny fampiasana ny mombamomba ny olona iray hafatoy ny fiantohana ara-tsosialy, ny tovovavy na ny renim-pianakaviana hanao heloka bevava. Ireo mpampiasa aterineto dia tokony hahafantatra fa mampiasa ny anaran'ny olona hafadia tena tsy ara-dalàna araka ny nambaran'ny Janoary 2010.
Faharoa, ny hosoka amin'ny maha-olona dia manondro ny fampiasana ny olona iray hafa (nana maty na velona) na nampiasa hosoka mihitsy aza. Ohatra, fampiharana karatra visa amin'ny anaran'ny olona efa maty. InternetNy mpikaroka dia mijery ny mombamomba ny olona toy ny anaran'ny mpampiasa na ny tenimiafina, ny daty nahaterahana, ny adiresy feno, ny fiantohana sosialy ary ny anarana feno ho an'nyny banky ary ny fampahalalam-baovao amin'ny carte de crédit, ny serivisy an-tserasera ary ny sonia miaraka amin'ny fikasana hanao heloka amin'ny aterineto.
Ny karazana fahatelo amin'ny hosoka amin'ny aterineto dia mikasika karatra fampindramam-bola sy fanonerana. Ny karatra debitikaMisafotofoto ny aterineto rehefa mandefa ny fampahalalam-baovao amin'ny baoritra na baikon'ny baikony ny mpisoloky iray mba haka tahaka ny karatra..Novonoin'nyfampiasana milina "skimming" izay mijery ny karatry ny carte de crédit / debit ary manangona fampahalalana manan-danja (ohatra, laharana sy kaonty kaontyanarana) ary tsy misy fifandraisana amin'ny karatra. Amin'ny tranga faratampony, io milina io ihany dia afaka mamaky ny kiran'ny karatra manokana.
Avy eo, phishing, fantatra amin'ny anarana hoe spoofing ihany koa, dia hosoka amin'ny aterinetofamoronana hafatra an-tsoratra, tranokala, ary mailaka avy amin'ireo mpanao heloka bevava aterineto hijery toy ny hoe avy amin'ny fiandohan'ny legioma. Ireo hafatra dia ampiasaina aomanangona tsipiriany mahatsikaiky, manokana ary ara-bola amin'ny mpampiasa iray. Ny hafatra fandefasana hafatra amin'ny mailaka na mailaka dia natao hanentanana ny fanehoan-kevitra avy amin'nympampiasa Internet. Amin'izany lafiny izany, ny votoaty dia afaka mampiasa feo iray izay mitaky valiny maika, fampahalalana mampientanentana na fampiasana vaovaofanambarana diso na fampahalalana. Ireo litera phishing dia matetika tsy tsy mitovy.
Ny hosoka fampindramam-bola amin'ny alim-bidy dia tranganà aterineto izay ampiasain'ny orinasa sasany amin'ny fampindramam-bolaho an'ny olona. Ny tanjon'izy ireo dia ny olona manana tombony ratsy na tsy mahafeno fepetra ho an'ny orinasa / banky fampindramam-bola. Mampiasa fehezanteny toy ny"Tsy manana tombony azo antoka?" na "Manana tantara ratsy momba ny credit?" Raha vantany vao voafafa ny mpiserasera amin'ny aterineto, dia manomboka manao hosoka ny mpisolokymangataka vola mitentina vola mba hiditra any amin'ny banky. Taorian'ny nahazoany ny vola, nanjavona ny mpanakona.
Ny loteria (na ny halehiben'ny loka) dia manondro ny hosoka amin'ny aterineto momba ny varotra an-tsokosokomandray fampahafantarana amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona na hafatra maneho fa nandresy vola na loka. Na izany aza, alohan'ny hanangonana ny loka na vola,Voatery handoa hetra na saram-pandehanana mialoha ny tra-boina. Raha vantany vao naverin'ilay niharam-boina ilay vola, dia nanjavona ny fangatahana na nangataka mihitsy azavola bebe kokoa. Amin'izao lafiny izao, ny besinimaro dia manamarika fa ny loteries na ny loka nandresy tany Kanada dia tsy iharan'ny sazy na haba.Ankoatra izany, amin'ny alalàn'ny fepetra fisorohana, ireo mpampiasa aterineto dia ampirisihina hitazona ireo loteria, manintona na fifaninanana miditra.